6 Okthoba - 19 Okthoba2017 (Isizulu)
6 Okthoba - 19 Okthoba 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
Amalungu enkulisa iBhekinkosi Crèche bebejabule kakhulu emva kokuthola isheke lika-R28 000 kwiMeya yeTheku uZandile Gumede kanye noSihlalo weziNhlelo zoMphakathi uKhansela uZama Sokhabase. Isithombe: themba khumalo
IMeya inikele ngo R3 million ezinhlanganweni zomphakathi
themba khumalo UMasipala weTheku unikele cishe ngo R3 million kwabahlomula ohlelweni lwe Grant-in- Aid abawu 107 ngomhlaka 29 Septhemba eHholo leDolobha. Lemali izohlinzeka ngosizo oludingeka kakhulu ezinhlanganweni zomphakathi ezingenzi nzuzo (NGO?s). Izinhlangano ezingenzi nzuzo ezivela kumawadi ahlukene kuMasipala zithole amasheke email engu-R28 000 ohlelweni lukaMasipala lwe Grant-in- Aid. Lolu hlelo luhlinzeka ngosizo lwezimali ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo, ikakhulukazi emiphakathini empofu. Amasheke anikezwe iMeya uZandile Gumede kanye noSihlalo weKomidi leziNhlelo zoMphakathi uZama Sokhabase. Ekhuluma nabahlomule kulolu hlelo, uMeya uGumede uthe uMasipala uzinikele ekusekeni izinhlangano ezingenzi nzuzo ngenxa yemisebenzi emihle eziyenzayo emiphakathini yazo ehlukene. ?Siyabona ukuthi izinhlangano ezingenzi nzuzo ziyizinsika ezibalulekile emiphakathini kanti ke yingakho nje sizoqhubeka sihlinzeke ngosizo kulezi zinhlangano ukuze zikwazi nazo ukusiza ngezinkinga ekubhekwana nazo kumawadi.? IMeya uGumede uthe uhlelo lwe Grant-in- Aid luhlinzeka ngosizo lwezimali ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo zasemiphakathini ukuze ziqhubeke nomsebenzi eziwenzela imiphakathi. ?Silibonga kakhulu igalelo elibanjwa izinhlangano ezingenzi nzuzo.? Uthe uMasipala weseka imikhakha eyehlukene, ebandakanya izinhlangano zentsha, abantu asebebadala, izinhlelo zomphakathi kanye nezinhlelo ezihlinzeka ngokudla. Exwayise izinhlangano ezisebenza ngenkohlakalo, uMeya uGumede uthe: ?Labo abazotholakala besebenzisa ngokungafanele imali yabakhokhi bentela bazobhekana nengalo yomthetho. Kufanele le mali isetshenziselwe ukuzuza komphakathi.? IMenenja yeNqubomgomo kanye nezokuPhatha eMnyangweni we- Community Participation and Action Support uXoliswa Mashiane uthe inani lezinhlangano ezizuza ohlelweni lwe Grant-in-Aid lincike enanini lezicelo ezitholwa iDolobha kanye nasenanini lezinhlangano ezifanelekile ukuthola lolu sizo. ?Izinhlangano zonke zihlolisisiwe ukuthi ziyizinhlangano zangempela yini.? UMashiane uthe ihhovisi lakhe lizophinda livakashele lezi zinhlangano ngaphandle kokuzazisa. ?Sifuna ukubona ukuthi zenza lokhu ezizinikele ukukwenza yini.? themba.khumalo@durban.gov.za Abami ngaphandle koMkhumbane Cultural and Heritage Museum (kusukela kwesokunxele) uMhlengi Gumede weCato Manor Area Based Management, iKhansela lakuWadi 101 uMzi Ngiba, uRodney Choromanski kanye neMenenja yeDolobha uSipho Nzuza bephakamise indondo.
UMkhumbane Museum uhlabane ngendondo
Gugu Mdlalose Kube nenjabulo ephindaphindiwe eDolobheni laseThekwini ngesikhathi uMkhumbane Cultural and Heritage Museum uhlabana ngendondo yokuba yisakhiwo esisha esihamba phambili e-Afrika emcimbini wemiklomelo i-Africa Architecture Awards. Okujabulise kakhulu ukuthi iDolobha lihlabane ngalendondo kusele izinsuku ezintathu vo ngaphambi kokuthi kube usuku lwezakhiwo emhlabeni jikelele olubizwa ngeWorld Architecture Day mhlaka 2 Okthoba. Umcimbi wokubungaza le mpumelelo, obuqondene nosuku lwezakhiwo iWorld Architecture Day, ububanjelwe kulesi sigcinamagugu esiseCato Manor esakhiwe ngemali engango R80 million, mhlaka 2 Okthoba. Lesi sigcinamagugu, esakhiwa yinkampani yezokwakha yakuleli i-Choromanski Architects, sihlonishwe ngendondo ngesikhathi kunomcimbi eCape Town mhlaka 28 Septhemba. Lo mcimbi wemiklomelo uhehe imingenelo ewu 307 eqhamuka emazweni awu 32, kanti isigcinamagugu saseMkhumbane yiso kuphela isakhiwo saseNingizimu Afrika ebesingenele umunxa we ?built?. Umcimbi wemiklomelo wenziwe ngenhloso yokuhlonipha kanye nokuklomelisa amaphrojekthi akulelizwekazi lase-Afrika, futhi ubuhlose ukubungaza ubuciko bezakhiwo, ukuhlonipha ochwepheshe bezokwakha kanye nokufukula omakhi kanye namadwebi bezakhiwo abasafufusa. IMenenja yeDolobha uSipho Nzuza ithe le phrojekthi ayithuthukisanga indawo yaseCato Manor kuphela, kodwa isizile ngokugcina umlando wale ndawo obalulekile yaphinde yakhulisa nezinga lezokuvakasha kuleli Dolobha. Okubaluleke kakhulu, uNzuza uthe ukuthi lesi sigcinamagugu sivulele abantu bakule ndawo amathuba emisebenzi. IBamba lePhini leNhloko yoMnyango wakwa- Architecture uNina Saunders ubashayele izindla abasebenzi abenze ukwakhiwa kwalesi sigcinamagugu kube yimpumelelo. Izindaba: Ikhasi 6 Izindaba: Ikhasi 2 Izindaba: Ikhasi 8
IZINHLELO ZOKULUNGISA I-DALTON ABESIFAZANE EZIKHUNDLENI ZOBUHOLI AMAZWIBELA E-ESSENCE FESTIVAL